Akụkọ - Mgbe emechara ngagharị agbụrụ, a kpụrụ ihe oyiyi na US
Mgbe eme ngagharị nke agbụrụ, awụchara arụsị na US
N'akuku United States, ihe akpụrụ akpụ nke ndị isi otu na ndị ọzọ akụkọ ihe mere eme jikọtara ya na ịgba ohu na igbu ụmụ amaala America ka a na-akwada, mebie, bibie, kwaga ma ọ bụ wepu ya na-esochi ngagharị iwe metụtara ọnwụ nke George Floyd, onye isi ojii, na ndị uwe ojii njide na May 25 na Minneapolis.
Na New York, American Museum of Natural History kwupụtara na Sọnde na ọ ga-ewepụ ihe akpụrụ akpụ nke Theodore Roosevelt, onye isi ala US nke 26, na mpụga ọnụ ụzọ mbata ya. Ihe akpụrụ akpụ ahụ na-egosi Roosevelt na-agba ịnyịnya, nke onye American American na Onye America America ji ụkwụ na-akwado ya. Lọ ihe ngosi nka ekwubeghị ihe ọ ga-eme ihe akpụrụ akpụ.
Na Houston, e wepụrụ abụọ akpụrụ akpụ Confederate na ogige ọha. Otu n'ime ihe akpụrụ akpụ ndị ahụ, Mmụọ nke Njikọ, ihe akpụrụ ọla kọpa nke na-anọchite anya mmụọ ozi nwere mma agha na nkwụ, guzoro na Sam Houston Park ruo ihe karịrị afọ 100 ma ọ dị ugbu a n'ụlọ nkwakọba ihe nke obodo.
Obodo ahụ mere ndokwa ịkwaga ihe oyiyi ahụ na Houston Museum nke African American Culture.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-akpọ ma mee ihe iji kpochapụ ihe oyiyi Confederate, ndị ọzọ na-agbachitere ha.
Na Richmond, Virginia, ihe akpụrụ akpụ nke General General Robert E.Lee abụrụla ebe esemokwu dị. Ndị ngagharị iwe kwuru ka ewepụrụ ihe akpụrụ akpụ a, Gọvanọ Virginia Ralph Northam nyere iwu ka ewepu ya.
Agbanyeghị, amachibidoro iwu ahụ ka otu ndị nwe ụlọ wee gbaa akwụkwọ n'ụlọ ikpe gọọmentị na-arụ ụka na iwepu ihe akpụrụ akpụ ga-emebi ihe ndị gbara ya gburugburu.
Onye ọka ikpe Federal Bradley Cavedo kpebiri n’izu gara aga na ihe akpụrụ akpụ bụ ihe onwunwe nke ndị mmadụ dabere na akwụkwọ ikike nke ihe owuwu ahụ site na 1890. O nyere iwu machibidoro steeti iwepụ ya tupu emee mkpebi ikpeazụ.
Nnyocha nke 2016 site na Southern Poverty Law Center, otu ọrụ na-akwadoghị iwu na-akwadoghị, chọpụtara na e nwere ihe karịrị 1,500 ọha na eze Confederate gafee US n'ụdị akpụrụ akpụ, ọkọlọtọ, akwụkwọ ikike obodo, aha ụlọ akwụkwọ, n'okporo ámá, ogige ntụrụndụ, ezumike na ebe ndị agha na-anọkarị na Ndịda.
Ọnụ ọgụgụ nke ihe oyiyi na ihe ncheta mgbe ahụ karịrị 700.
Echiche dị iche
Associationtù Na-ahụ Maka Ọganihu nke Ndị Na-acha Agba, òtù na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ, akpọwo ka iwepụ akara ngosi nke Confederate site na oghere ọha na eze maka ọtụtụ afọ. Agbanyeghị, echiche dị iche iche banyere etu a ga-esi merie ihe ndị mere eme.
"Enwere m obi nkoropụ maka nke a n'ihi na nke a bụ ihe nnọchianya nke akụkọ ihe mere eme anyị, nke a bụ nnọchiteanya nke ihe anyị chere na ọ dị mma," Tony Brown, onye prọfesọ ojii nke mmụta mmekọrịta ọha na eze na onye isi ọrụ nke Racism na Racial Ahụmịhe Workgroup kwuru na Mahadum Rice. N'otu oge ahụ, anyị nwere ike nwee ọnya n'obodo, anyị echeghị na ọ dị mma ọzọ ma anyị ga-achọ iwepu onyonyo ahụ. ”
Na mmechi, Brown kwuru na ya ga-achọ ịhụ ka ihe a kpụrụ akpụ nọrọ.
“Anyị na-achọkarị ịchacha akụkọ ihe mere eme anyị. Anyị na-achọkarị ịsị ịkpa ókè agbụrụ abụghị akụkụ nke onye anyị bụ, ọ bụghị akụkụ nke usoro anyị, ọ bụghị akụkụ nke ụkpụrụ anyị. Ya mere, mgbe ị napụrụ ihe akpụrụ akpụ, ị na-ehichapụ akụkọ ihe mere eme anyị, site na oge ahụ gaa n’ihu, ọ na-eme ka ndị na-akwagharị ihe akpụrụ akpụ ahụ chee na ha emeela nke ọma, ”ka o kwuru.
Notghara ime ka ihe pụọ ma ime ka ihe anya na gburugburu ya bụ otu ị si eme ka ndị mmadụ ghọta etu ịkpa ókè agbụrụ dị, Brown na-arụ ụka.
“E ji ego mee ego nke mba anyị, ma na-ebipụta ego anyị niile na ndị ọcha, ụfọdụ n’ime ha nwekwara ndị ohu. Mgbe ị gosipụtara ụdị akaebe ahụ, ị ​​na-ekwu, chere obere oge, anyị na-akwụ ụgwọ ihe na owu e biri ebi nke ndị nwe ohu. Mgbe ahụ ị ga - ahụ etu agbụrụ ịkpa oke agbụrụ si jọọ njọ, ”ka o kwuru.
James Douglas, prọfesọ iwu na Texas Southern University na onyeisi oche nke Houston isi nke NAACP, ga-achọ ịhụ ka ewepụrụ ihe oyiyi ndị a na-akwụ ụgwọ.
“Ọ dịghị ihe ọ bụla jikọrọ ha na Agha Obodo. E guzobere ihe oyiyi a iji sọpụrụ ndị agha jikọrọ ọnụ na ime ka ndị Africa America mara na ndị ọcha na-achịkwa. Ewubere ha iji gosipụta ike ndị ọcha nwere karịa ndị Africa America, “ka o kwuru.
Douglas bụkwa onye na-akatọ mkpebi Houston ịkwaga Mmụọ nke Njikọ Njikọ aka na ebe ngosi nka.
“Ihe akpụrụ akpụ a bụ iji sọpụrụ ndị dimkpa lụrụ ọgụ maka ikike obodo, nke kachasị bụ ndị lụrụ ọgụ ka ndị Africa America bụrụ ndị ohu. Ọ dị gị ka mmadụ ọ bụla ga-atụ aro itinye ihe akpụrụ akpụ na Museum Holocaust nke kwuru na a na-ewu ihe akpụrụ akpụ iji sọpụrụ ndị gburu ndị Juu na ụlọ gas? ” Ọ jụrụ.
Ihe akpụrụ akpụ na ihe ncheta bụ maka ịsọpụrụ ndị mmadụ, Douglas kwuru. Naanị itinye ha na ihe ngosi ihe mgbe ochie n'Africa nke America anaghị ewepụ eziokwu ahụ bụ na ihe akpụrụ akpụ na-asọpụrụ ha.
Maka Brown, ịhapụ ihe oyiyi na ebe anaghị asọpụrụ onye ahụ.
“Nye m, ọ na-egosi njikọ ahụ. Mgbe ị nwere ihe oyiyi Confederate, ọ naghị ekwu ihe ọ bụla gbasara onye ahụ. O kwuru ihe ụfọdụ banyere idu ndú. Ọ na-ekwu ihe banyere onye ọ bụla tinyere aka na ihe akpụrụ akpụ ahụ, onye ọ bụla kwuru na akpụrụ akpụ ahụ dị ebe ahụ. Echeghị m na ị chọrọ ihichapụ akụkọ ihe mere eme, ”ka o kwuru.
Brown kwuru na ndị mmadụ kwesịrị iwepụtakwu oge na-agụ etu o siri bụrụ na “anyị kpebiri na ndị ahụ bụ ndị dike anyị ịmalite, na-agụ etu anyị siri kpebie onyogho ndị ahụ dị mma”.
Ndụ Black Ndụ na-amanye America ịlele ihe gara aga karịa Confederate statues.
HBO wepụrụ oge 1939 Gone na Wind site na ntanetị ya na ntanetị n'izu gara aga ma na-ezube ịmegharị ihe nkiri kpochapụwo na mkparịta ụka banyere akụkọ ihe mere eme ya. A katọrọ ihe nkiri a maka inye ịgba ohu otuto.
Nakwa, n'izu gara aga, Quaker Oats Co kwupụtara na ọ na-ewepụ ihe oyiyi nke nwanyị ojii site na nkwakọ ngwaahịa sirop ya afọ 130 na pancake mix brand Aunt Jemima ma gbanwee aha ya. Mars Inc gbasoro ya site na iwepu onyonyo onye ojii site na nkwakọ ngwaahịa osikapa ama ya ama ama ama ama sị na ọ ga-agbanwe ya ọzọ.
A katọrọ aha abụọ ahụ maka ihe osise ha dị iche iche na ojiji a na-eji nkwanye ugwu gosipụta oge ndị ọcha ndịda na-eji "nwanne nna" ma ọ bụ "nwanne nna" n'ihi na ha achọghị ịkpọ ndị isi ojii "Mr" ma ọ bụ "Oriakụ"
Ma Brown na Douglas na-ahụ mmegharị HBO bụ ihe ezi uche dị na ya, mana ha na-ele mkpali nke ụlọ ọrụ nri abụọ ahụ dị iche.
Ihe ngosi na-adịghị mma
Douglas kwuru, sị: “Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ime. “Anyị nwetara ụlọ ọrụ ndị isi iji ghọta na ụzọ ha adịghị mma. Ha na - ekwu, sị, 'Anyị chọrọ ịgbanwe n'ihi na anyị ghọtara na nke a bụ nkọwa ọjọọ nke ndị Africa America.' Ha matara ya ugbu a ma ha na-ekpochapụ ha. ”
Maka aja aja, mmegharị ahụ bụ ụzọ ọzọ maka ụlọ ọrụ iji ree ngwaahịa ndị ọzọ.
Ndị na-eme ngagharị iwe na-anwa ịkwatu ihe akpụrụ akpụ nke Andrew Jackson, onye bụbu onye isi ala US, na Lafayette Park n'ihu White House n'oge ọgbaghara enweghị oke agbụrụ na Washington, DC, na Mọnde. JOSHUA ROBERTS / REUTERS
Post oge: Jul-25-2020